2018 China rabha muchini kukura - China Qingdao rakadzikama Machinery
Sezvo bottoming kubva muna 2016, China rabha muchini indasitiri akaramba kuvandudza 2017, pamwe kaviri digit kukura mune okutengesa kwemari, wandei kuwedzera ekisipoti zvakaoma, uye kuwedzera chepamusoro profitability. Maererano indasitiri Insiders, zvipfuwo uye vatorwa tai makambani ari kushingaira bhizimisi, uye kudiwa rabha michini, kunyanya mukuru-zvakarurama akangwara rabha michini, iri nani. Zvinotarisirwa kuti China rabha muchini indasitiri kuchaita pamutemo kupinda kumusoro gwara muna 2018.
Rubber michina emakambani 'okutengesa kwemari kuramba yekudyidzana
Maererano nokuongorora rabha michini nenyanzvi nhengo China Chemical Equipment Association, muna 2017, 24 zvikuru rabha michini emakambani mhiri nyika yakawana okutengesa kwemari pamusoro bhiriyoni 7,735 Currencykuva, kuwedzera 11.3%. By Fananidzo, zvachose okutengesa kwemari pamusoro China kuti rabha muchini maindasitiri muna 2017 iri kutarisirwa kusvika bhiriyoni 10,65 Currencykuva, kuwedzera 10.9%. Ichi ndicho chokutanga gore-on-gore kuwedzera indasitiri okutengesa kwemari kubva 2015.
Muna 2017, zvinonyatsorehwa uchishandisa mwero China kuti rabha michini emakambani yaiva nekaupenyu yakakwirira, uye okutengesa kwemari akaitwa vakawanda yakawedzera. Pakati 24 makambani dzakaongororwa, paiva 15 okutengesa kwemari kukura, 8 rovira, uye musoro 10 rokutengesa zveminda vaiva bhiriyoni 6,54 Currencykuva, nekurangarira kuti 61,4% zvachose okutengesa kwemari, uye maindasitiri wevasungwa yakawedzera 0,7%. Achisimba.
Sezvineiwo kunowedzera profitability
Kwete chete okutengesa kwemari kubudirira nouchapupu kukura, asi mubereko China kuti rabha muchini indasitiri rave rakawedzera yekudyidzana muna 2017 tichienzanisa rapera, uye indasitiri wacho profitability kwakawedzera yekudyidzana.
Zvinonzwisiswa kuti 24 rabha michini emakambani vose kuita purofiti zvakanaka, uye mubereko kukura emakambani chikonzero ruzhinji. Kunyanya, profitability kuti dziri rabha michini makambani kwakavandudza yekudyidzana. Somuenzaniso, muna 2017, boka kubudirira purofiti anenge mamiriyoni 93 Currencykuva, nepo muna 2016 yaiva kurasikirwa mamiriyoni 770 Currencykuva.
Maererano indasitiri vaongorori, kufambisa simba unotiranga kukura kuri kunyanya kuwedzera mirairo uye kuvandudzika zvibereko kwakakomba kumucheto. Zvisinei, zvinokosha kuziva kuti mutengo mbishi zvinhu wamuka hasha, izvo akaderedza zvisingabatsiri varikumahombekombe.
Kunze kwenyika vemamwe mukutsinhana yakawedzera yekudyidzana
Maererano nenhamba, muna 2017, aina pakukurukura kukosha 24 rabha michini emakambani mu China akanga bhiriyoni 1,836 Currencykuva, kumusoro 32,3% gore-on-gore. By Fananidzo, zvinofungidzirwa kuti zvachose ekisipoti kukosha China kuti rabha muchini indasitiri kuchasvika US $ 360 miriyoni muna 2017, rimwe gore pamusoro-gore zvibereko 20%.
Maererano indasitiri vaongorori, kukura wokumwe Exchange zvakaoma kubva ekisipoti iri kunyanya nokuti kuti tai makambani China kwakaita vakabvuma US "kushorwa kaviri" uye makasimbiswa tai mafekitari muUnited States uye kuSoutheast Asia. The kudiwa rabha michini akaumba mumwe diki mugumo. Panguva ino, nechido China kuti tai makambani kuvaka mafekitari mhiri kwemakungwa inoramba ichivira. Maererano rokutanga uwandu, vanopfuura 10 Tire zvirongwa kutanga kana kuronga kutanga. Mukuwedzera, international tai musika mari akatsiga, uye kune zvakawanda Tire mari muzvirongwa muna Continental uye Bridgestone, izvo kunouyisa hwaro aina rabha michini mu China. The indasitiri anotarisira kuti China rabha michini kunze kwenyika acharamba kunatsiridza 2018, uye mwero internationalization zvichabviswa mberi hwakavandudzika.
Post nguva: Aug-24-2018